:Bọchị: February 14, 2020
N'ime Kọmitii curezụta Azụmaahịa Sectoral nke Bursa Chamber nke Azụmaahịa na Industrylọ Ọrụ haziri maka iwelie mbupụ nke ụlọ ọrụ, nkwụsị ọhụụ bụ Mexico, obodo 15th kasị nwee ụba ụwa. BTSO n'ime ọgbakọ a haziri maka ngalaba igwe ahụ [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) Railway Railway Train Rụọ na oru nke Civil Society Organizations on 13.02.2020/3/XNUMX na Ankara Train Station ebe ke Hall XNUMX Behiç Ergun zutere na Consultative nzute. [More ...]
Usoro nnyefe akwụkwọ maka iweghachite ndị ọrụ na aha dị iche iche nke General Directorate nke TCDD Tasimacilik mezuru. Pịa ebe a maka aha ndị aga-aga akwụkwọ nke e lere dị ka ihe kwesịrị ekwesị ma nwee ikike ịme nyocha ahụ. [More ...]
Usoro Mpempe akwụkwọ bidoro site na Mersin Metropolitan Municipality Transportation Ngalaba, “Mersin TCDD Station - Mezitli LRT Metro Line Construction na Electromechanical Systems Supply, Installation, Commissioning and Metro for 2019/714553 İKN [More ...]
Thelọ Rail Systems Association ga-enwe "Mmekọrịta na Asambodo na Rail Systems" na February 28, 2020. Ọgbakọ ga-eme na Ostim Conference Hall / Ankara maka ụbọchị (otu) ụbọchị, atọ (atọ) na [More ...]
Ngwa ndị nwere ọgụgụ isi na njikọta ụzọ na ọnụnọ na-enwu n'okporo ụzọ nke Bursa Metropolitan rụpụtara gosipụtara na data mba ụwa, nke belatara mkpọchi okporo ụzọ. N'ime nyocha nke ụlọ ọrụ Netherlands, nke na-akwadebe nsogbu okporo ụzọ n'ụwa niile, 2018 [More ...]
Atụmatụ ahụ a ga-agbatị ga-abanye na Hospitallọ Ọgwụ City na Kocaeli Metropolitan Assembly na atụmatụ ahụ. Mịnịstrị nke Transportgbọ njem ga-eme ka usoro ahụ dị ike ruo mgbe May Kocaeli Metropolitan Municipality ga-eme nzukọ ọgbakọ omebe iwu na Leyla Atakan Cultural Center. [More ...]
IETT bịanyere aka na Chamlọ nke ndị injinia mepere anya n'ime mkpesa na ndozi nke bọs ya. Ya mere, azịza nke ajụjụ ndị a bụ ụlọ ọrụ kwụụrụ iche na-anọghị na ndị na-enyocha ụlọ ọrụ IETT na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ nkata. [More ...]
N'ime mmezigharị ọrụ nke Antalya Metropolitan Municipality Transportation Master Plan, o zutere ndị isi na ndị otu obere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Kumluca na Finike. Isiokwu mgbanwe, mmeghari ohuru na ntụgharị okwu na nzukọ [More ...]
N'ime oke usoro Antalya Metropolitan Municipal 3rd Stage Rail Sistem, a na-ewepụ ụzọ ụlọ ije Meltem, nke na-egbochi ụzọ mkpọda okporo ụzọ. Iji hụ na ụzọ nchekwa nke ndị na-aga ije na Mahadum Akdeniz dị [More ...]
Ünal Karadağ, bụ onye otu United United Employees Union na onye bụ onye osote onye isi nke TCDD 3rd Regional Directorate Izmir Traffic na Station Management Service Directorate, a chụgara ya na Malatya n'okpuru aha akpọgharị akpọgharị. [More ...]
A ga-akpọrọ ụgbọelu na ụgbọ elu na-ahụ maka njikwa ụgbọ elu gaa na General Directorate of akai (OGM) nke oflọ Ọrụ Ọrụ Ugbo na Ọhịa. Dịka ọkwa nke Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ ugbo na oke ọhịa nke ọhịa (OGM) nke edepụtara na Official Gazette. [More ...]